Wonke umuntu okungenani kanye ezimpilweni zabo (kanye, cishe, futhi izikhathi ezingaphezu kwesisodwa) wabhekana nalokhu ithi: amanga embhedeni, yentaba udoti, okuyinto kuyoba kudingekile ukuba ingenzele etafuleni mbiko sidle kanye izincwadi kweshumi e-e-mail, okuyinto kumele iphendulwe, futhi baqamba amanga futhi ucabanga ukuthi kwenzeke konke kamuva. Futhi njengoba wazi, ukuthi izinto ungakwenzi lokhu, kodwa ngifuna uwafake emuva kwesikhathi, futhi Oblomov efana, umsebenzi ubonakala umgomo elikude, kodwa ebukekayo.
Nokho, kwenzeka ukuthi umuntu akenzi lutho kodwa ukuhlehlisa futhi ukuhlehlisa, ngesikhathi esifanayo sokuqalekisa yena; Ehlupheka, kodwa ngeke benze lutho ngakho. Ngaphambi ukuthola lokho okumelwe ukwenze kanye nendlela ukumisa ukuvilapha, kudingeka uqonde ukuthi iziphi izinhlobo ubuvila zenzeka. Kunezinhlobo ezahlukene, isibonelo, uhlobo ubuvila, uma ngempela awawenzi lutho futhi nje zilale phansi, likhiphe ngesikhathi uphahla, noma ezinye - lapho nenza into, kodwa hhayi ukuthi udinga ini, ngokubeka izinto ezibalulekile ngemva kwesikhathi.
Ngakho, liyini ubuvila? Psychology ihlinzeka ilula kakhulu futhi enembile impendulo: ubuvila - kuba sekungavumi noma ukungakwazi ukwenza. Ngezinye izikhathi ukuthambekela ubuvila abagqoka futhi uhlamvu esingokwemvelo, uma kungenxa izici of ubuntu, ezimweni ezinjalo, umuntu kunzima ukushintsha. Nokho, ngokuvamile kakhulu ubuvila kunesizathu esithile. Kunezizathu eziningana, futhi kuye ngokuthi yini ncamashi kwenza umuntu hhayi ukwenza lutho, kufanele ukhethe indlela kanjani ukuyeka ukuvilapha.
Isikhathi esining impela kwenzeka ngenxa ubuvila ... isithukuthezi, umuntu umane ayinantshisekelo lokho akwenzayo. mkhuba ejwayelekile kakhulu abafundi abakhetha ukungasinaki ukufunda, kodwa ukuchitha isikhathi ku mnandi ngabo umsebenzi, abantu unganelisekile umsebenzi wabo, kodwa azilungile ukuthi ushintshe noma yini. Kanjani ukuyeka ukuvilapha kulesi simo? Impendulo isobala, kufanele ashintshe umsebenzi noma kabusha ukuthola okuthile okuthakazelisayo e wenzani, kungenzeka, ukuthola isisusa sina njengoba liqhubeka wamanje ukuqeqeshwa eliphezulu. Ngokwesibonelo, kushukunyiswe umuntu ukusebenza - ukwenza ngcono isimo sezimali nenhlalakahle. Ungazama ngandlela-thile diversify isimiso, kodwa uma okwamanje akunakwenzeka ushintshe noma yini, kufanele ukusekelwa ukuzikhuza, okuyinto kuphela indlela ekunqandeni ubuvila elihlobene ne disorganization.
Disorganization njengoba imfanelo uhlamvu - lena esinye isizathu ezijwayelekile ezenza abantu bayavilapha. Endabeni yokuntuleka inhlangano idinga umsebenzi oqhubekayo yena, ukusiza uhlu nsuku zonke, zaveza isheduli ngilokhu kodwa njalo, ukugcina idayari. Kuyadingeka ukubhekana nezindaba ukugijima futhi ngeke bavunyelwe buthelela izinto. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuchaza ngokucacile imigomo futhi ezidingekayo ukuze siyifinyelele, imisebenzi ezincane. Ungafunda izimiso ka ukuphathwa kwesikhathi, futhi balahle ubuvila, umsebenzi kuzoba mnandi.
Ubuvila kungahle kubangelwe ukukhathala ezinzima izingane ngokomzimba noma ngokomzwelo nawukucindezeleka noma imizwa. Kulokhu, ukususa ubuvila - kuba ukuphumula. Kusukela bakhathale ngokomzwelo kusiza iholide ezakhayo - hhayi amanga kokungenzi lutho phezu kombhede, futhi yiluphi ushintsho kwenkundla, uhambo nemvelo, wokuzilibazisa omusha. Uma ukhathele emzimbeni, akufanele zizibeke icala futhi uhlushwa yini silahle izinto ezibalulekile, nje, lamukele iqiniso lokuthi udinga ukuphumula, futhi zinike isikhathi lulama, ukuzivocavoca kungakujabulisa nomphumela ozuzisayo abhekisele esimweni esasivamile. By endleleni, lo mdlalo kusiza zonke izinhlobo ubuvila.
Kube Ubuvila, ukunganakwa, okunzima kakhulu kule ngokwengqondo uhlelo Ngenxa ubuvila. Kwenzeka ukuthi lutho indoda ejabulisa, akaboni phambi kwakhe injongo yokuphila futhi engaqondi ukuthi sifuna ukwenzani ngokuphila kwami. Kulesi simo, umbuzo main iba hhayi kanjani ukuyeka ukuvilapha, kodwa umbuzo indlela aphinde ajabulele ukuphila. Ungazama baziqonde bona ngokwabo, ukushintsha izinto eziza kuqala, yenza uhlu lwemigomo futhi izinhlelo, ukuze iphupho. Nokho, ngezinye izikhathi kungcono nokufuna usizo lochwepheshe.
Kunezimo lapho uba indlela lazy ukuvikela ukwehluleka. Ake sithi ufuna ukuqala umsebenzi iphrojekthi entsha, futhi konke sekulungile eceleni, mhlawumbe uwena nje wesaba ukuthi konke kuyoba yini kwafana ungathanda, noma besaba ukuthi umsebenzi okungahambanga kahle. Kulokhu, omunye indlela yokuphuma - sokuvuma ezesaba ngayo bese uthatha ingozi, ngoba ukwenza lo msebenzi uyokwenziwa kusadingeka.
Uyini ukulawula isitokwe? Izindlela lokulawula yokusungula. Inhlangano accounting, umthwalo, uhlelo